Izibane ezikhanyisiweyo, ukukhanya kwePaneli ekhanyayo, ukukhanya okuLizwe
Kutheni ukhetha ukukhanya
Isibane se-LED Panel
Isibane sePaneli ye-Edge-lit
Isibane sePaneli yasemva ekhanyisiweyo
I-UL kunye ne-DLC i-Panel Light
Isibane sePaneli eDimmable
I-CCT Tunable ye-Panel Light
Isibane sePaneli engafakwanga manzi
I-RGB kunye ne-RGBW kunye ne-RGBWW Iphaneli ye-LED
I-Framless kunye ne-Sky Panel Light
Ukukhanya kweepaneli ezihlukeneyo ze-LED
Jikeleze IPaneli yokuKhanya
Iphaneli ye-LED Panel Ezantsi
Umphezulu weLitha yePaneli ekhanyayo ye-LED
Umphezulu wePaneli yesibane se-LED
Imibala ephindwe kabini ye-Panel Light
Ukukhanya kwepaneli enkulu ekhokelayo
Isibane somgca we-LED
Yenziwe kwakhona ukukhanya kweLayini yomtya
Ukukhanya komgca welayini omisiweyo
Umphezulu ophathwe yi-LED Linear Lightar
Isibane se-UVC seterilizer
I-UVC-B Sterilizer isibane
I-UVC-C Sterilizer isibane
Ukusonga kwe-UVC Sterilizer Wand
I-Handheld UVC Sterilizer Wand
I-E27 ye-UVC Bulb
Isibane se-UV seterilizer
Ibhokisi ye-Sterilizer ye-UVC
Induction ye-infrared UVC ye-Sterilizer
Indlu yangasese ye-UVC ye-Sterilizer
IOfisi kunye neGumbi leNdibano
Isikolo kunye neMfundo yeDyunivesithi
Unonophelo lwempilo kunye negumbi lokucoca
Ivenkile Ivenkile Ivenkile Ivenkile Yokugcina Ivenkile
Gym & Indawo yeMidlalo
Indlela yesitimela kunye nesitimela
Ikhaya kunye nabanye
Isicelo soThintelo lwamanzi
Isicelo esinefreyimu engenazinto
Isicelo se-RGB kunye ne-RGBW kunye ne-RGBWW
Isicelo sePanel Downlight Series isicelo
Ubukhulu bePaneli yokuKhanya
Inkqubo yokuKhanyisela ukukhanya kwePaneli
Isikhokelo sokuFakelwa kwemveliso
Umakhi onamava onyaka onamava wokukhanyiswa kwepaneli ekhokelwayo. Umenzi onamandla onemigca egqibeleleyo yemveliso egubungela uninzi lolunye ukhanyiso lwepaneli. Umenzi onobuchule onokwazi ukubonelela ngezisombululo ezikhanyayo ezigcweleyo ezikhokelwa. Umenzi othembekileyo ophambili ulandela ukwaneliseka kwabathengi ngonaphakade!
IOFISI kunye NENDLELA YOKUGQIBELA
Ukukhanyiswa kweepaneli ezikhanyayo zepaneli yokukhanya kunye nokuyilwa kwale mihla ye-luminaire kuvelisa ii-atmospheres ezifanelekileyo zomsebenzi kunye nokusebenza kwamandla, ukukhanya kwe-Lightman luminaires imigangatho. Izisombululo zokukhanya kwe-Lightman zenza ukuba umsebenzi uqhutywe ngokulula, ukunyusa amanqanaba okuphila kwiiofisi kwaye nokusika okuphezulu kwentloko.
IP65 ukukhanya kwePaneli yamanzi ye-IP65
Isibane sephaneli ye-IP65 ye-IP yenzelwe ukusetyenziswa kwiindawo ezinothuli okanye ezimanzi okanye ezimanzi apho ngaphambi kokuba oku kungenzeki ngepaneli eziqhelekileyo ze-LED. Ilungele iindawo ezimanzi, njengegumbi lokuhlinzwa, igumbi lokuhlambela kunye nekhitshi, igumbi lokuhlambela njl.njalo kufanelekile ukufezekisa iimfuno zegumbi elicocekileyo.
I-RGBWW IPaneli yokuKhanyisela
Iyakwazi ukuhlengahlengisa umbala we-RGB kwaye itshintshe ubushushu bemibala ukusuka kumhlophe ofudumeleyo ukuya kumhlophe opholileyo kunye nomsebenzi owonakalayo. Umgama wokulawula kude ongenantambo unokufikelela kwi-25-30 yeemitha. Ukulawulwa kokuphathwa ngesandla kunye nokulawulwa kwefowuni yeselfowuni kuyafumaneka. Isetyenziswe ngokubanzi kwindawo yemidlalo yeqonga, i-KTV, ibha, i-skating rink, ihotele, enkulisa, indawo yokutyela, indawo zokuzonwabisa.
Isibane se-LED Linear
Iitayitile ezahlukeneyo zokhetho zokuhombisa amacala kunye nesiphelo Inqwelomoya ongenamthungo uyilo olude lwesilivere, umbala omhlophe okanye omnyama wezindlu ukukhetha ubude Inokwenzeka into, ubuninzi buyi-2400mm
Hlanganisa ukukhanya okuqaqambileyo kwee-LEDs ezingeniswe ngeMitsubishi PMMA LGP ye-Ultra -onda, uyilo olulula lomthungo kunye nokufakwa lula kwe-vaeirty yezicelo.
Ukunyusa isilungiso esinye kwi-LED kungonga phantse i-7 yeedola ngenyanga.
I-LED isebenzisa amandla angama-85% kune-halogen kunye ne-18% ngaphantsi kweCFL.
I-LED ifikelela ukukhanya okugcweleyo kwangoko, kungekho flicker okanye kushushu.
Ukukwazi ukubonelela ngezisombululo ezikhanyayo ezikhokeleyo.
I-AC100 ~ 277V 50W I-LED Flat Ceiling Panel Light 2 2 2
I-AC220-240V SMD2835 60W 600x600mm i-backlit ye-Ceiling Panelamp eyi-60x60cm
Isibane se-Indoor 60W Iphinda ibuyele kwi-Flat Panel Light 120 × 30
I-5 yeminyaka iwaranti ye-54W ye-Square Slim Ceiling Lighting 60x60cm
Malunga neShenzhen Lightman
I-Shenzhen Lightman Optoelectronics Co, Ltd lishishini eliphakamileyo eliphantsi korhulumente ngamashishini aphambili ekhanyisa kunye nemveliso yovavanyo. Ngo-2012, i-Lightman imisela umzi-mveliso we-OEM "I-LED Panel Lighting Co, Ltd." loo nto yenza i-OEM i-odolo yeenkampani zokukhanyisa ekhaya nakwamanye amazwe. Inkampani ibonelela ngetekhnoloji yokukhanyisela ipaneli ye-LED kwaye inikezela ngomgca obanzi wezisombululo zepaneli ye-LED.
Ukudutyulwa kwesakhiwo seMizi-mveliso, iPaki ye-3, i-Guangming, iShenzhen City, kwiPhondo laseGuangdong, 518106, PRChina
Ngenisa idilesi ye-imeyile yakho ukufumana iziganeko zeendaba zeMetal zamva nje.